Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Airbus Corporate Jets dia nahazo fandresena ho an'ny ACJ319neo
Amin'ny fahafaha-manidina mpandeha valo 6,750 nm / 12,500 km na 15 ora, ny ACJ319neo dia hitondra ny ankamaroan'izao tontolo izao ao anatin'ny faritra tsy miato.
Ny mpanjifa tsy fantatra dia manome baiko ny fiaramanidina ACJ319neo
Ny ACJ319neo dia hampiasaina amin'ny motera CFAP International LEAP-1A
Mpanjifa 12 ACJ320neo Family izao dia nametraka baiko 16 ka anisan'izany ny enina ACJ319neo
Jetbus Corporate Jets (ACJ) Nahazo baiko fanampiny ACJ319neo miaraka amina mpanjifa tsy fantatra, manasongadina ny antso an-tsena ho an'ity fiaramanidina ity izay manome traikefa manidina tsy manam-paharoa miaraka amin'ny tranony malalaka sy eo anelanelan'ny kontinanta. Ny ACJ319neo dia hampiasaina amin'ny motera CFAP International LEAP-1A.
Mpanjifa 12 ACJ320neo Family izao dia nametraka baiko 16 ka anisan'izany ny enina ACJ319neo.
"Faly izahay fa mahazo baiko hafa ho an'ny ACJ319neo. Ny mpanjifa dia mankafy mandeha amin'ny kabine malalaka ary manidina amin'ny lalan'ny kontinanta. Ny ACJ319neo dia manana fahamendrehana matanjaka. Ny mpanjifa dia handray soa amin'ny fahaizan'ny mpandeha avo kokoa miaraka amin'ny fampiononana miavaka sy ny vidin'ny asa mitovy amin'ireo fiaramanidina nentim-paharazana noho ny fikojakojana, fiofanana ary vidiny tsara kokoa, "hoy i Benoit Defforge, Jetbus Corporate Jetbus Filoha.
Amin'ny fahafaha-manidina mpandeha valo 6,750 nm / 12,500 km na 15 ora, ny ACJ319neo dia hitondra ny ankamaroan'izao tontolo izao ao anatin'ny faritra tsy miato. Ny fandefasana ny ACJ319neo dia nanomboka tamin'ny taona 2019 ary ny telo dia efa miasa miaraka amina mpanjifa telo.
Ny ACJ319neo dia ao anatin'ny ACJ320neo Family, misy ny kabine malalaka indrindra amin'ny jet d'exploitation, na dia mitovy habe amin'ny sidina kabine lehibe aza. Ny ACJ320neo Family dia manome ihany koa ny vidin'ny asa mitovy amin'izany noho ny fikojakojana ambany kokoa sy ny fiantohana fiofanana - ampahany amin'ny lova fiaramanidina - manome vola mitentina mitovy amin'izany raha ampiarahina amin'ny solika sy ny fitetezana ary ny fiampangana ary toy ny vokany mivantana dia manana tombony bebe kokoa koa izy io. Dian-tongotra CO2.
Fiaramanidina Airbus maherin'ny 13,000 no natolotra eran'izao tontolo izao, tohanan'ny tamban-tseranana sy ivotoerana fiofanana manerantany, manome mpanjifa jet orinasa tsy manam-paharoa fanohanana eo amin'ny sehatra. Ny mpanjifa Airbus corporate jet dia mahazo tombony ihany koa amin'ny serivisy mifanaraka amin'ny filan'izy ireo manokana, toy ny "antso iray miandraikitra ny rehetra" foibe fikarakarana mpanjifa jet corporate (C4you), programa fikojakojana namboarina ary ny ACJ Service Center Network.
Airbus Corporate Jets (ACJ) dia manolotra fianakavian'orinasa maoderina sy feno indrindra eran'izao tontolo izao, manome ny mpanjifa safidy lehibe indrindra amin'ny cabins tsy manam-paharoa sy azo ovaina ary malalaka, mamela azy ireo hisafidy ny fampiononana tadiavin'izy ireo amin'ny habeny ilainy - manolotra azy ireo tokana fanandramana manidina.
Jetsan'ny orinasa Airbus mihoatra ny 200 no miasa isaky ny kaontinanta, ao anatin'izany ny Antarctica, izay manasongadina ny fahaizan'izy ireo amin'ny tontolo sarotra.